Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog - Page3of 26 -
ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် အသီးအနှံများ
Min Thuta | Food, Health | October 30, 2019
လူတစ်ယောက် နေ့စဥ် ပျော်ရွှင်ကျန်းမာနေဖို့က အနေအထိုင်အစား အသောက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှန်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျိုးပြုစေမဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Min Thuta | Health, Knowledge | October 29, 2019
အခုလို မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး ကာလတွေမှာ အအေးမိ ဖျားနာခြင်းတွေ နဲ့ အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲမှုတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ကာလမှာ ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိုင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုတွေနေထိုင်သင့်လဲဆိုရင်…
Min Thuta | Knowledge | October 27, 2019
Min Thuta | Food, Health | October 8, 2019
ဖရဲသီးကတော့ လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်တဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့အနံ့က မွှေးတယ်၊ အရသာကချိုတယ် ဒါပဲလားဆိုတော့ ဖရဲသီးစားရင် ရရှိနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ကဲဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေရရှနိုင်မလဲဆိုရင်တော့…
Min Thuta | Knowledge | October 6, 2019
ဖုန်းတွေဟာ သင့်အတွက်တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပြီး အကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရရှိစေတယ်ဆိုတာတော့ အမှန်အကန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ မလိုအပ်ပဲ ဖုန်းကိုသုံးမိနေခြင်းဟာ သင့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဖုန်းကို အကျိူးရှိရှိနဲ့ဂရုတစ်စိုက်ချင့်ချိန်သုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် အကျိုးရှိနိုင်မယ်ထင်တဲ့ Tips လေးတွေဖော် ပြပေး လိုက်ပါတယ်…
သင့်ကိုသင်ဝနေတယ်လို့ ထင်ရင်ဒီအချက်တွေကို ဂရုစိုက်ပါ
Min Thuta | Health, Knowledge | September 24, 2019
နေ့စဥ်ပင်ပန်းနွယ်နယ်မှုတွေနဲ့ကြုံလာပြီး အစားအစာကိုပိုစားဖြစ်ခဲ့လာတယ်၊ ဝလာတယ်လို့ စိတ်ထဲက ထင်လာခဲ့ရင် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း အစားလျော့ခြင်းတို့အပြင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
နေ့စဥ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက် ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ?
Min Thuta | Health, Knowledge | September 14, 2019
လူတစ်ယောက်ပုံမှန်ပျော်ရွှင်နေဖို့နဲ့ ကျန်းမာနေဖို့ဆိုရင် နေ့စဥ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချက်တွေပေါ်မှာ အများကြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေမှသာ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ရမယ့် တာ၀န်တွေ အလုပ်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
လူတစ်ယောက် အတွက် နံနက်စာက အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက နေ့လည်စာနဲ့ ညစာထက် နံနက်စာက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ နံနက်စာ ကောင်းကောင်းစားပေးခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ကျန်းမားရေးအတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုပါသေးတယ်။
ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ အသားရည်ထိန်းသိမ်းကြမယ်
Min Thuta | Health | September 9, 2019
ဒီတစ်ခေါက်တော့ သင့်ရဲ့အသားအရည်နဲ့အရေပြားပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့နည်းလမ်းအချို့ကိုမျှဝေပေးလိုပါတယ်။ ပြုလုပ်ရတာလွယ်ကူတဲ့အပြင် လူတိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Min Thuta | Education, Knowledge | September 1, 2019
အခုလို စာမေးပွဲကာလ၊ စာမေးပွဲနီးလာတဲ့အခါစိတ်ပူပင်တတ်တဲ့သူတွေ ဘယ်ကနေစပြီး စာကိုကျက်ရမလဲ လေ့လာရမလဲ ဝေခွဲရခက်တဲ့သူတွေ အတွက် စာမေးပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပုံ နည်းလမ်းလေး တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်
All times are GMT 6.5. The time now is 12:36 pm.